Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 29)
Waxa xiga ee ka imanaya Samsung waxay noqon doonaan shaashado jilicsan; waxaad horey uheesay shatiga
Shirkadda soo saarta Kuuriya ee Samsung ayaa mar horeba ka diiwaangashan dalka Maraykanka ruqsadda taleefannada casriga ah oo leh shaashad jilicsan oo ay suuragal tahay inay soo bandhigto sannadka 2017ka
Samsung Galaxy Note 7 dadka isticmaala Faransiiska waxay helayaan microSD lacag dhan 128GB oo bilaash ah
Samsung France waxay siinaysaa kuwii haystay Galaxy Note 7 kaarka 128GB microSD oo magdhaw u ah waxkasta oo telefoonka ku dhacay.
HTC Desire 650 ayaa lagu muujiyay naqshad 'xajin' dhabarka
Dhabarka HTC Desire 650 waxaa ku jira faahfaahin si loogu xisaabtamo kuwa taleefankooda gacantu si fudud ugu siibmayo: muuqaalkiisa adag.
Xiaomi waxay u timid inay diido jiritaanka Mi MIX Nano
Agaasimaha suuq geynta Xiaomi wuxuu ku qasbanaaday inuu soo baxo si uu ugu dhawaaqo in Xiaomi Mi MIX Nano ay tahay shey aan runtii jirin.
Galaxy S8 wuxuu la imaan doonaa qalab cusub oo Snapdragon 835 ah, 8 GB oo RAM ah, GPU cusub iyo tikniyoolajiyad cusub oo degdeg ah.
Xantaan cusub waxaa nala tusay qeexitaanno farsamo oo cusub oo suurtagal ah ee Samsung Galaxy S8. Snapdragon 835, 8 Gb oo RAM ah iyo wax kaloo badan
Android Nougat wuxuu ku garaacay tijaabiyeyaasha beta ee Maamuusta 8 oo leh UI cad
Waxa ugu horreeya ee aad ka hesho Sharafta 8 beta Nougat ayaa ah in lakabku ka fudud yahay oo u eg yahay mid daahir ah Android weligiis.
Dareenka ugu horreeya ee LG X Power, oo ah terminal leh baytar awood leh
Haddii aad raadineyso terminal-dhamaadka-dhamaadka leh batari weyn, u kac aragtida ugu horreysa ee LG X Power, maadaama aysan kaa niyad jabin doonin.
Madow Kulul Jimcihii 2016: BIXIN LAYAAB LEH !!
Waxaan ku sii wadaynaa usbuuca madow ama usbuuca Black Friday 2016, markan maqaal aan hayo ...
HTC 10 evo oo laga bilaabay adduunka, waxaa kaliya laga iibsan karaa khadka tooska ah
HTC Bolt waxaa laga soo saaray 2 toddobaad ka hor Mareykanka si gaar ah Sprint, oo ah xamuul Mareykan ah. Hadda HTC 10 evo ayaa la bilaabay.
Bluboo Edge wuxuu iibiyaa 30.000 cutub usbuuca ugu horeeya ee presale
Bluboo waa astaan ​​kale oo ka timaadda Shiinaha iyada oo ujeedkeedu yahay in lagu sii daayo iibsigaaga maxaa yeelay waxay leedahay shaashad hore oo qalooca dhinaca Edge.
Xiaomi Mi Mix waxaa lagu sifeeyey midab cad
Xiaomi Mi Mix wuxuu ahaa kacaan u noqoshada taleefan bilaa biraale ah. Hadda waxaa lagu sifeeyey caddaan qaab la yaab leh.
ZUK Edge oo leh Snapdragon 821, 6GB RAM iyo Android 7.0 ayaa ka muuqda astaamaha
ZUK Edge waa taleefan cusub oo wata culeys Snadragon 821, GB of RAM iyo Android 7.0 Nougat oo la sii deyn doono bilowga bisha Diseembar.
Nokia ayaa 'ku soo noqoshada taleefannada casriga ah' la xaqiijiyay sannadka 2017
Sannadka 2017 wuxuu noqon doonaa sanadkii Nokia ay dib ugu soo laabatay suuqa taleefannada casriga ah iyada oo ay la socdaan terminaallo isdaba joog ah oo naga sii wadaya doonista ah inaan ogaanno.
Vivo Xplay 6, taleefan casri ah oo wata shaashadda 5,46 screen QHD, Snapdragon 820, 6GB RAM iyo laba kamaradood
Vivo ayaa shalay bilawday XPlay 6 oo leh 5,46 "shaashadda QHD, 6GB oo RAM ah, Snapdragon 820 chip iyo laba qaabeynta kamaradda gadaal.
Iibinta OnePlus 3 ayaa si rasmi ah uga joogsata Mareykanka iyo Yurub
Markii aan bilawnay OnePlus 3T, oo ah nooca cusub ee la cusbooneysiiyey, shalay, OnePlus 3 mar dambe lagama iibsan karo shabakadda.
Xalka Android ee ugu da'da weyn guriga
Maanta waxaan kuu keenaynaa xalka ugu fiican ee Android ee ugu da'da weyn guriga, Launchers gaar ah iyo xalal khaas ah.
Miyuu Xiaomi Mi MIX mari doonaa baaritaanka adkeysiga JerryRigEverything dhibaato la'aan?
Xiaomi Mi MIX waxay soo martay tijaabooyinka JerryRigEverything iyo natiijooyinka waxaan kugula talineynaa inaad booqato si aad u ogaatid.
Qaar ka mid ah taleefannada gacanta ee casriga ah ee loo yaqaan 'Android' waxay xogta shaqsiyeed u diri lahaayeen Shiinaha
In kabadan 700 milyan oo taleefannada casriga ah ee Android-ka ah oo qiimo jaban leh ayaa leh softiweer ururiya xogta dadka isticmaala una diraya server-yada Shiinaha
Ulefone Armor, oo ah taleefan aad u adkeysi badan oo ka yar 150 euro
Ulefone wuxuu layaabaa Ulefone Arnor, taleefan culus oo diida dhicitaanka, naxdinta iyo IP68 la aqoonsan yahay sidaa darteed waa biyo la'aan 150 euro
Galaxy A7 (2017) wuxuu noqon doonaa mid biyo diid ah wuxuuna yeelan doonaa shaashad dhan 5,7.
Shahaadada IP68 ee ku jirta Samsung Galaxy A7 (2017) ayaa ka yaabisay dadka maxalliga ah iyo shisheeyahaba iyagoo noqday kii ugu horreeyay ee taxanahan haysta.
Bluboo Edge, taleefan kale oo casri ah oo ku soo biiraya isbeddellada dhinacyada dhinacyada qalooca $ 129,99
Haddii aad raadineyso terminal leh qeexitaanno aasaasi ah iyo naqshad aad u wanaagsan oo qalooca oo ay leedahay Galaxy S7 Edge, Bluboo Edge waa ikhtiyaar
Huawei Mate 9 Pro ayaa hadda si rasmi ah uga shaqeeya Shiinaha iyadoo leh shaashad dhan 5,5 ″ QHD, 6GB RAM iyo Android 7.0
Huawei Mate 9 Pro mar horeba waa xaqiiq ka jirta Shiinaha maadaama loo soo bandhigay sida 5,5 "casriga ah oo leh xallinta QuadHD iyo Android 7.0.
Huawei wuxuu sharxayaa sababta ay uga soo baxday sameynta Google Pixel
Huawei waxay u timid inay soo bandhigto sababta aysan u dooneyn inay soo saarto Pixel-ka Google. Tani waxay xaqiijineysaa wararka xanta ah ee 1 bil ka hor.
Galaxy S8 ayaa noqon doonta terminal-kii ugu horreeyay ee Samsung ay la yeelato Force Touch
Samsung ma rabto inay ka tagto wax kasta oo ka mid ah dhuumaha iyo waxa aan ilaa hadda ognahay, Galaxy S8 wuxuu lahaan doonaa waxyaabo badan oo lama filaan ah sida Force Touch
Samsung waxay bilaabaysaa horumarinta cusbooneysiinta Nougat ee Galaxy S6 iyo S6 gees
Galaxy S6 iyo S6 gees waxay lahaan doonaan qalabkooda Nougat mustaqbalka iyagoo og in Samsung ay bilaabatay horumarinteeda maalmahan ka hor.
Dib-u-eegista Isbaanishka ee Xiaomi Redmi Note 4. Terminal weyn oo Android ah oo ka yar 200 euro
Halkan waxaan kaaga tageynaa dib u eegista ugu dhameystiran ee Xiaomi Redmi Note 4 ee Isbaanishka. Dib u eegis aan ku tusineyno wax walba, wax walba iyo wax walba.
OnePlus 3T wuxuu noqon karaa telefoonka ugu horeeya ee leh 8GB RAM
Nofeembar 15, OnePlus 3T ayaa la soo bandhigi doonaa, taleefan hadda la yaqaan, mahadsanidiin xan, in ay yeelan karto 8 GB oo RAM ah.
Shirkadda Huawei ayaa iibisay 9 milyan oo taleefannada casriga ah ee Huawei P9 ah
Huawei wuxuu gacanta ku hayaa wax soo saar weyn oo ah Huawei P9 oo ay iibisay, tan iyo markii la iibiyay bishii Abriil, tiradaas oo ah 9 milyan
OnePlus 3 wuxuu yeelan doonaa beta Android Nougat bishaan iyo nooca ugu dambeeya bisha Diseembar
OnePlus 3 wuxuu heli doonaa nooca beta ee Android 7.0 Nougat bishaan, nooca ugu dambeeya wuxuu imaan doonaa dhamaadka sanadka.
Kuwani waa sawirrada Vivo X9 iyo kamaradaha hore ee laba-geesoodka ah
Vivo X9 waa terminaal kale oo kor u kaca isbeddelka kamaradaha laba-geesoodka ah, in kasta oo uu ku sameeyo xagga hore halkii uu gadaal ka ahaan lahaa.
HTC Bolt, waa taleefan cusub oo gaar ah oo laga helo Mareykanka
Waxay umuuqataa inuu heystay wax yar oo ka mid ah Snapdragon 810 Chips oo iyaga la haray isla markaana wuxuu ka dhigay HTC Bolt oo si gaar ah looga heli karo Mareykanka.
Ulefone waxay u dabaaldegaysaa imaatinka Shiinaha Madow ee Jimcaha dalabyo la yaab leh
Ulefone waxay u dabaaldegtaa Shiinaha Madow ee Jimcaha iyagoo siinaya taxaneyaal terminal ah qiimo aad u jilicsan iyada oo loo marayo degelkeeda Aliexpress
Sida loogu rogo Android kaaga HTC adoo ku rakibaya HTC Sense 7 iyo dhamaan barnaamijyada HTC ee asalka ah
Maanta waxaan ku tusinayaa sida aad ugu rogi karto Android-kaaga HTC adoo ku rakibaya HTC Sense 7 oo leh Blinkfeed si buuxda u shaqeynaya iyo dhammaan barnaamijyada HTC ee asalka ah.
Sida loo xakameeyo loona badalo nalka badhamada Samsung Galaxy S7, oo u ansaxa dhamaan Galaxy iyo Root la'aan
Maanta waxaan ku tusineynaa xalka saxda ah ee lagu xakameynayo isla markaana wax looga beddelayo nalalka badhamada Samsung Galaxy S7, S6, S5, iwm, iwm.
Samsung Galaxy S8 waxay lahaan doontaa laba nooc, mid aan lahayn 6,2 z bezel 'S8 Plus'
Samsung wuxuu ku boodayaa barkadda wuxuuna bilaabi doonaa laba nooc oo ah Galaxy S8. Mid ka mid ah noocyada noocan oo kale ah waa S8 Plus waxayna noqon doontaa taleefan bilaa beel ah oo la a MI MIX ah.
OnePlus 3T oo wata Snapdragon 821 ayaa la sii deyn doonaa Nofeembar 15
Qualcomm's Snapdragon 821 chip ayaa noqon doona jilaaha ugu weyn ee taleefankaas cusub ee shirkaddaas lagu magacaabo OnePlus: the OnePlus 3T
Tani waa sida Android 7.1 Nougat beta uu ugu dhaqaaqo dhinaca Galaxy S7
Haddii aad leedahay gees Samsung Galaxy S7 hubaal fiidiyowgan ayaa xiiseyn doona inaad fiiriso si aad fikrad fiican u hesho.
Bluboo Edge waxaa lagu sii deyn doonaa horay-u-amarro 10-ka Nofeembar
Bluboo Edge wuxuu lahaan doonaa maalintiisa weyn bisha Nofeembar 10 adoo haysta iibin ka hor $ 129,99 oo loogu talagalay terminal oo leh xiiso xiiso leh
Moto M ayaa hada si rasmi ah uga shaqeysa dalka Shiinaha iyadoo leh batteri dhan 3.050mAh iyo jir bir ah
Motorola Moto M horeyba waa taleefan rasmi ah gudaha Shiinaha oo leh taxane taxane ah oo aad u xiiso badan iyo qiimo dhan $ 295 si loo badalo.
Samsung Galaxy S8 ayaa dib loo dhigi karaa bisha Abriil
Waxay u muuqataa in Samsung ay go'aansatay inay dib u dhigto soo-saarista Samsung Galaxy S8 si ay u tijaabiso badhanka cusub ee loogu talagalay Sirdoonka Artificial
Ku calaamadee Nofeembar 11 jadwalkaaga, Ulefone waxay bilaabi doontaa dhiirrigelinteeda ugu weyn ee sanadka
Nofeembar 11, waxaad awoodi doontaa inaad gasho qiimo dhimis iyo dallacsiinno taxane ah, oo ay kujirto ikhtiyaarka aad ku heli karto alaabada bilaashka ah.
Lenovo wuxuu ku faanaa 1 milyan oo unug oo laga iibiyay Moto Z
Lenovo way ku farxi kartaa la soo wareegida Motorola iyo malyan malyan oo unug oo laga iibiyay Moto Z way ka badan yihiin intaas.
Samsung Galaxy S8 waxaa ku jiri doona caawiye cusub oo dijitaal ah
Samsung waxay ku dhacaysaa tareenka xawaaraha sare leh oo ah caawimaad dalwad leh kaaliye u gaar ah oo uu abuuray ViV Labs, oo ka kooban Siri.
Waxaan lahadalnaa Juan Cabrera, Tababaraha Wax soosaarka ee Huawei, oo kusaabsan Mate 9
Waxaan lahadleynaa Juan Cabrera, Tababaraha Wax soosaarka ee Huawei, oo noo sheegaya dhammaan sirta Huawei Mate 9 iyo isbahaysiga barwaaqada ah ee Leica
Kani waa EMUI 5.0, lakabka caadiga ah ee uu adeegsado Huawei Mate 9
Waxaan ku tusineynaa dhammaan sirta EMUI 5.0, lakabka caadiga ah ee Huawei Mate 9 isticmaalo oo ku saleysan Android 7.0 Nougat
Huawei Mate 9, aragtidiisa ugu horreysa ee fiidiyowga ah
Dareenka ugu horreeya ee fiidiyowga ka dib tijaabinta Huawei Mate 9, oo ah silsiladda cusub ee soo-saaraha Aasiya iyo taas oo u muuqata kamaraddeeda iyo tayada dhammaystirka
Riix sawirrada Moto M oo leh naqshad iyo qeexitaanno ayaa la sifeeyey
Waxaan dib ugu laabaneynaa Motorola's Moto M xog cusub, markaan markaan ka helnay sawirada saxaafada aalad la soo bandhigi doono 8-da Nofeembar
10 ilbidhiqsi gudahood ayaa dhammaan Xiaomi Mi MIX lagu iibiyaa iibkoodii ugu horreeyay ee flash
Waxaad tirineysaa 10 ilbidhiqsi mana jiraan wax intaa ka sii badan oo loo yaqaan 'Xiaomi Mi MIX' iibkeeda tooska ah ee la bilaabay saaka. Waxaa ku xigi doona Nofeembar 8.
Huawei wuxuu bilaabay Fit, oo ay xiran tahay nolol batrool leh
Haddii aad raadineyso wearaar kaa caawinaya inaad jir ahaan iyo jir ahaanba fiicnaato, Huawei Fit oo leh 6 maalmood oo batari ah ayaa si fudud ugu habboon
Shirkadda Huawei waxay u soo bandhigeysaa Mate 9 shaashad 5,9 ″ ah iyo kamaradaha Leica-ka ah
Huawei waxay samaysay Mate 9 rasmi ah, shaashad leh 5,9 "shaashad iyo qaabeynta laba kamaradood oo Leica leh € 699.
Meizu Pro 6S oo leh kamarad cusub iyo bateri ka weyn ayaa hada rasmi ah
Marka laga hadlayo Pro 6, Meizu Pro 6s waa cusbooneysiin ku saabsan labo ka mid ah walxaha ugu muhiimsan ee taleefanka: batteriga iyo kamaradda.
Honor S1, Huawei's smartwatch soo socda oo leh shaashadda E-Ink
Shirkadda Huawei waxay diyaarineysaa soosaarida Honor S1, smartwatch leh qaab wareegsan, shaashad e-ink iyo waxyaabo kale oo badan
Xiaomi waxay ku iibisaa dhammaan Mi Note 2s kaliya 50 ilbidhiqsi gudaha Shiinaha
50 ilbiriqsi oo keliya ayay Xiaomi awood u yeelatay inay ku iibiso dhammaan Mi Note 2 iibkaas flash-ka ah ee ay billaabatay saacado badan ka hor.
Kani waa Huawei Fit oo leh shaashad elektaroonig ah
Haysashada tiknoolajiyaddan, Huawei Fit wuxuu lahaan doonaa madax-bannaanid weyn mahadnaqa shaashadda khad elektarooniga ah. Badhanka badhanka jirka ayaa ka dhamaaday
Beta-ka Xperia Nougat ee Xperia X Perfomance ayaa bilaabmaya in la soo saaro
Xperia X Perfomance wuxuu durbaba bilaabay inuu helo Nougat beta ee ku jira boosteejooyinkaas isticmaaleyaasha kaqeyb gala barnaamijka.
Samsung Galaxy S8 wuxuu yeelan doonaa 90% saamiga shaashadda / mugga sida MI MIX
Macluumaad ayaa ka yimid Kuuriyada Koonfureed oo tilmaamaya in Samsung Galaxy S8 uu noqon karo taleefan casri ah bilaa biro sida Xiaomi Mi MIX
Motorola Moto M wuxuu ka soo baxayaa AnTuTu oo wata qalabka 'Helio P10'
Motorola Moto M waxaa la soo bandhigi doonaa 8-da Nofeembar waana hadda markaan macluumaad cusub ka helnay aaladda benchmark-ka 'AnTuTu'.
Huawei wuxuu ku dhawaaqayaa imaatinka dhow ee EMUI 5.0
Huawei wuxuu ku dhawaaqayaa imaatinka dhow ee lakabkiisa gaarka ah ee EMUI 5.0 oo ay weheliso Huawei Mate 9 phablet cusub
TAG Heuer rose gold waa Android Wear smartwatch oo aadan awoodin
Haddii aad raadineyso raaxo qaali ah oo loo yaqaan 'Android Wear', TAG Heuer Connected rose waa dahabka ugu qaalisan ee leh OS-ka xilligan.
LG G6 wuxuu lahaan lahaa kaamiro "dhan-in-one" ah oo ay ku jiri doonaan qalabka wax lagu baaro ee loo yaqaan 'iris scanner'.
Lama xaqiijin karo in LG G6 uu ka socon doono qayb, laakiin waxaa jira warar xan ah oo sawir-qaadaha iris-ka ku ridaya kamaradda "dhammaantood hal"
Barnes & Noble waxay qorsheynayaan inay ku laabtaan suuqa kiniinka ee Nook
Barnes & Noble waxay ku soo noqdeen suuqa kiniiniga dhawr sano ka dib iyada oo mid diirada lagu saaray taxanaha Nook. Wareeg dhan
Meizu M5 wuxuu si rasmi ah ula socdaa shaashad 5,2, ah, jirka polycarbonate iyo 3GB oo RAM ah € 121
Meizu wuxuu sarkaalka M5 ka dhigayaa shaashad 5,2 ah, 3GB oo RAM ah iyo jirka polycarbonate qiimo ahaan, oo ah noocyada leh RAM badan, oo ah € 121
Tani waxay noqon kartaa Vivo X9 cusub iyo X9 Plus
Waxaan horeyba u ogaan karnaa naqshadeynta iyo inta badan qeexitaanka soo socda ee Vivo X9 iyo X9 Plus. Ka taxaddar kamaraddaada, way kula yaabi doontaa
Moto M oo leh shaashad 5,5 ″ 1080p iyo 4GB oo RAM ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa 8-da Nofeembar
Moto M wuxuu noqon doonaa terminal xiiso leh qeexitaankiisa iyo qiimaha aan ka ognahay sheyga wararka. Faahfaahintaada waa in la xaqiijiyaa.
Huawei P9 Lite, falanqaynta boqorka cusub ee bartamaha
Falanqaynta Isbaanishka ee Huawei P9 Lite, taleefan aad u dhameystiran oo noqda ikhtiyaarka ugu fiican ee laga fiirsado bartamaha qaybta
Kani waa isdhexgalka LeEco Le Pro 3 cusub ee nooca USA ah
Tani waa waxa xiriirka caalamiga ah ee Mareykanka ee LeEco LePro 3 u eg yahay, oo la bilaabi doono Nofeembar 2 oo leh barnaamijyo gaar ah
Dhibaatooyin badan oo ku saabsan Google Pixel, ka dib iftiinka kamaraddaada hadda Bluetooh
Dhibaatooyin badan oo soo kordhay Google Pixels ayaa hadda u sabab ah isku xirnaanta liidata ee Bluetooth isku dhafan oo aan macquul aheyn in la sameeyo xiriir wanaagsan.
LG wuxuu soo bandhigayaa LG U oo aad ugu eg Nexus 5X
LG waxay horey u leedahay taleefan kale, LG U kaas oo lagu garto shaashad 5,2 ah iyo batari 3.000 Mah ah si loo gaaro maalinta ismaamulka
BQ Aquaris M8, kaniiniga cusub ee lagu sameeyay Spain
BQ Aquaris M8 waa kiniin cusub oo ay soo saartay shirkadda Isbaanishka oo si gaar ah loogu talagalay dadka isticmaala cuna waxyaabaha ku jira warbaahinta badan
Thanks to AnTuTu waxaan ognahay qeexitaanno farsamo oo dheeri ah oo Meizu Pro 6S ah oo la soo bandhigi doono Isniinta soo socota
Daadad cusub ayaa markan ku jira AnTuTu waxay na tusaysaa qeexitaannada Meizu Pro 6S ee la soo bandhigi doono Oktoobar 31, 2016.
Noocyada cusub ee Samsung Galaxy A7 waa la sifeeyey
Iyadoo loo marayo AnTuTu waxaan awoodnay inaan ku xaqiijino astaamaha farsamo ee cusub ee Samsung Galaxy A7 2017 oo suuqa wax yar ka socon doona
Ulefone Tiger, oo ah taleefan casri ah oo wata 4.200mAh baytariga, kuna jira iibka for 86,19
Ulefone Tiger horeyba waa loo sii iibiyay oo adigaa iska leh € 86,19 when marka la iibinayo ilaa iyo Oktoobar 29. Taleefan leh batari dhan 4.200 Mah
Xiaomi kaliya waxay soo saari doontaa 10.000 oo unug oo ah MI MIX bishiiba
Ma ahan in Xiaomi ay rabto inay na geliso ilko dhaadheer ka dibna aysan awoodin inay iibsato Mi MIX, laakiin inay kaliya soo saari karto 10.000 unug bishii
ZTE wuxuu soo bandhigayaa Axon 7 Max oo leh kamarad gadaal leh
ZTE wuxuu ku boodayaa bandwagon kaamirooyinka laba-geesoodka ah ee dhabarka taleefannada isagoo wata Axon 7 Max oo maanta lasoo bandhigay
Laba qalab cusub oo Xiaomi ah ayaa ka muuqda TENNA
Laba nooc oo cusub oo ah xarumo cusub oo Xiaomi ah ayaa ka soo muuqday TENNA. Waxaan ka hadlaynaa Xiaomi 2016111 iyo Xiaomi 2016112 oo noqon doona heer gelitaan
LG Mobile wuxuu daabacaa natiijooyinka maaliyadeed ee ugu xun rubuc bilood
Muuqaalka qaab-dhismeedka 'LG G5' kuma habboona baahiyaha isticmaalayaasha waxaana loo daayay inuu yahay dambiile natiijooyinka musiibo ee masiibada ah.
Huawei wuxuu daaha ka rogay raaxaysiga 6, taleefanka gacanta 5,, 4.100mAh batari iyo 3GB oo RAM ah
Batariga 4.100 mAh ee ay Huawei raaxeysato 6 soo bandhigeyso, taleefan leh shaashad 5 "ah, wuxuu ku siinayaa ismaamul aad u weyn.
Sawir cad oo ka mid ah daadashada Motorola Moto M
Laba nooc oo kaladuwan ayaa ku degi doona, mid Shiinaha iyo midka kale ee suuqyada kale ee Aasiya ee Motorola Moto M, oo aan ka hayno muuqaal cad.
Dukaanka Google waxaa ku jira saddex smarwatches oo qiimo sare leh oo loo yaqaan 'Android Wear smarwatches' oo ku jira repertoire
Dukaanka Google wuxuu ku darayaa 3 smartwatches qiimo leh hoosta Android Wear si ay u diyaariso iibka kirismaska.
Samsung Galaxy S8 wuxuu lahaan doonaa iskaan-qaade muraayadaha indhaha
Samsung waxay raadineysaa siyaabo lagu ogaado oo ay la socoto isdhexgalka muraayada faraha ee muraayada ee Galaxy S8 ee soo socota, sidoo kale way fiican tahay.
Xiaomi waxay been abuurtay sawirada xayeysiinta ee Xiaomi Mi Mix
Xiaomi waxay been abuurtay sawirada xayeysiinta ee Xiaomi Mi Mix si loo muujiyo taleefan leh wareegyo dhinaca khafiifka ah marka loo eego sida dhabta ah
Samsung ayaa bilaabi doonta cusbooneysiin software ah oo ku saabsan baytariyada European Samsung Galaxy Note 7
Samsung ayaa ku dhawaaqday cusbooneysiin Yurub ah taas oo yareyneysa nolosha batteriga 60% sidaa darteed si dhib yar ayey ku socon doontaa maalin uun.
Qiimaha soosaarka Pixel XL waa $ 285
Qiyaasta qiyaasta wax soosaarka Google Pixel XL horey ayaa loo ogaa, kaliya $ 285, marka waxay la mid tahay heerka iPhone iyo Galaxy
BlackBerry DTEK60, oo ah Android cusub oo ka socda shirkadda Canadian, ayaa hadda rasmi ah
BlackBerry waxay ku xayeysiisaa DTEK60 inay tahay taleefan leh muuqaal ka sareeya astaamihii hore ee DTEK50 iyo waliba qaabeyn ka fiican.
Xiaomi wuxuu ku dhawaaqay Mi MIX inuu yahay telefoon shaashad leh shaashad la'aan
Xiaomi ayaa jabisay sanduuqa waxyaabaha la yaabka leh waxayna soo bandhigtay taleefan casri ah oo ay kaga duwan yihiin inta kale: Xiaomi Mi MIX.
Iibinta Smartwatch ayaa hoos u dhacday 50%
Iibinta saacadaha saacadaha, kuwa aasaasiga ah iyo kuwa horumarsanba, waxay hoos udhaceen in kabadan 50% sanad gudihiis iyo caalamkaba, waa maxay sababta xaaladdan?
Meizu Pro 6s ayaa lagu dhawaaqi doonaa Oktoobar 31 iyada oo la adeegsanayo qalabka loo yaqaan 'deca-core chip'
Meizu Pro 6s waa terminal kale oo leh astaamo wanaagsan oo la soo bandhigi doono Oktoobar 31 sida Meizu M5, in kasta oo ay tahay meel dhexaad ah
Xiaomi Mi Note 2, sawirada dhabta ah waa la sifeeyaa saacado kahor soo bandhigideeda
Sawirro taxane ah ayaa daadanaya oo muujinaya naqshadda xiaomi mi note 2 oo ugu dambeyn yeelan doonta shaashad labalaaban oo laaban sida Galaxy Note 7
Dib u eeg TV BOX TX3 Pro ama sida loogu beddelo TV-gaaga TV-ga Android kaliya 30 Euros
Maanta dib-u-eegidgan TV Box TX3 Pro, waxaan ku falanqeyneynaa qalabka 'Android Tv' ee leh 'Android M' oo qiime ahaan ku kacaya 30 euro.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Huawei Mate 9 Pro: waxay yeelan doontaa 4X zoom optical waxayna ku kacaysaa 1300 dollars
Huawei Mate 9 Pro wuxuu ku biirayaa bandwagon-dhamaadka sare qiimo aan la fileynin oo taleefan ah oo ka socda shirkadda Shiinaha: $ 1.300.
Sidoo kale Elephone s7 iyo s7 mini
Shirkadda Shiinaha ee Elephone ayaa soo bandhigtay labadeeda terminaal ee cusub, Elephone s7 iyo s7 mini, oo leh astaamo xiiso leh iyo qiime aad u qurux badan.
Samsung Galaxy S7 Edge Blue Coral wuxuu imaan doonaa Singapore bisha Nofembar
Samsung ayaa dhawaan shaacisay in Samsung Galaxy S7 Edge Blue Coral uu ku dhufan doono suuqa Singapore bisha November 5
Abuureyaasha Zetta ayaa iska caabinaya
Abuureyaasha casriga casriga ah ee loo yaqaan 'Extremaduran smartphone' ayaa aadaya barnaamijka 'Mirror Mirror' si ay u difaacaan waxa loo diidi karo doodaha u dhexeeya qosolka iyo ceebta
Samsung ayaa ku dhawaaqday Galaxy C9 Pro oo leh 6 ″ 1080p bandhigay, Snapdragon 653 iyo 6GB RAM
Samsung Galaxy C9 Pro ayaa hada lagu soo bandhigay dalka Shiinaha wuxuuna leeyahay shaashad 6 "ah, 6GB oo RAM ah iyo 16MP labada kamaradood oo gadaal iyo gadaal ah.
Nexus ma yeelan doono tilmaam ku saabsan dareeraha faraha ama iftiinka habeenka ee Pixel
Google ayaa xaqiijisay in Nexus uusan lahaan doonin iftiinka habeenka iyo tilmaamaha ku saabsan dareeraha faraha ee furaya guddiga ogeysiiska
OnePlus 3T oo wata qalabka Snapdragon 821 ayaa dhawaan imaan doona
OnePlus wuxuu sii deyn doonaa cusbooneysiinta qalabka OnePlus 3 oo leh 3T. Waxay lahaan doontaa qalabka 'Snapdragon 821 chip' ee taleefanka u dhawaanaya midka asalka ah.
ZTE Axon 7 Max ayaa lagu dhawaaqi doonaa Oktoobar 27
ZTE wuxuu leeyahay taleefan kale oo casri ah sameynta tanina waa sheeko; ZTE Axon 7 Max. Qalab shaashad 6-inch ah oo leh xallinta 1080p.
Tani waa Nintendo Switch, desktop iyo konsol la qaadan karo mid
Halkan waxaan kaaga tagnay fiidiyoow ah waxa uu noqonayo Nintendo Switch, fikrad cusub oo ah isku xirnaansho isku dhafan oo ka socda Nintendo, desktop iyo la qaadan karo dhammaantood hal.
Macluumaad dheeri ah ayaa laga helay Xiaomi Mi Note 2 illaa 5 maalmood kadib soo bandhigideeda
5 maalmood ka dib soo bandhigida Xiaomi Mi Note 2, macluumaad cusub ayaa ka soo baxaya isla waraaqaha wax soo saarka ee loo isticmaali doono xayeysiiskaaga.
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0, oo ah flash drive loogu talagalay taleefankaaga casriga ah ama kaniiniga
Waxaan tijaabinay SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0, oo ah flash drive loogu talagalay taleefankaaga Android ama kaniiniga oo kuu oggolaanaya inaad ballaariso xusuusta qalabkaaga
HTC Ocean waxay noqon doontaa sharadka weyn ee HTC inuu noqdo qof markale dunida casriga ah
Ugu dambeyntiina jiritaanka HTC Ocean ayaa la xaqiijiyay, Terminalka cusub ee HTC diyaarinaya inuu mar kale noqdo qof ka mid ah taleefannada casriga ah.
Huawei wuxuu soo bandhigayaa qalabkiisa cusub ee Kirin 960 octa-core 16nm oo leh Mali-G71 MP8 GPU
Shirkadda Huawei ayaa soo bandhigtay qalabkeeda cusub ee loo yaqaan 'Kirin 960 octa-core chip iyo 16nm naqshadaha dhismaha oo markii ugu horreysay lagu arki doono Mate 9 oo la soo bandhigi doono bisha Nofeembar.
Ulefone Tiger, waa taleefan casri ah oo aan caadi aheyn oo ka yar 100 euro
Ulefone Tiger waa taleefan casri ah oo cajiib ah oo leh astaamo qiimo leh iyo batari 4200 mAh ah oo aad hadda ku iibsan karto wax ka yar boqol euro
Samsung waxay tixgelinaysaa suurtagalnimada inay soo bandhigto hal calan oo keliya sanadkiiba
Waxaa jira waxyaabo badan oo la isla dhexmarayo oo ku saabsan suurtagalnimada in Samsung ay soo bandhigi doonto hal calan sanadkiiba. Tani miyay noqon kartaa dhamaadka xadka ogeysiiska?
OPPO R9S Plus waxaa lagu sifeeyaa hal maalin kadib soo bandhigisteeda oo leh 6 GB oo RAM ah
6 GB oo RAM ah waa waxa qalabkan cusub ee OPPO yeelan doono, R9S Plus, oo ugu dambeyn la soo bandhigi doono berri, Oktoobar 19.
Netatmo Kusoo dhawow, waxaan falanqeyneynaa kamaradda ilaalada ee aqoonsata wejigaaga
Falanqaynta kamaradda Netatmo Welcome, oo ah nidaam ilaalin fiidiyoow ah oo kuu oggolaanaya inaad ka kormeerto wax kasta oo guriga ka dhaca taleefankaaga Android.
Muraayado aad u khafiif ah oo ka mid ah Xiaomi Mi Note 2
Sugitaanka in la xaqiijiyo, kuwani waa 2 sawirro dhab ah oo ah waxa noqon doona Xiaomi Mi Note 2 oo la soo bandhigi doono Oktoobar 25
Xiaomi Mi Note 2 oo leh shaashad qalooca ayaa lagu dhawaaqi doonaa Oktoobar 25
Oktoobar 25 waa taariikhda ay dooratay shirkadda Shiinaha inay soo bandhigto taleefannadeeda cusub ee casriga ah ee loo yaqaan 'Mi Note 2'.
Kani waa HTC Bolt oo leh shaashad 5,5 ″ 1080p ah, 3GB oo RAM ah oo aan lahayn maqal maqal ah
HTC waxay kusii socotaa sharad adag waxayna sii wadaa waxkeeda si ay u soo saarto taleefannada casriga ah sida HTC Bolt-ka cusub oo aan ka helnay sawirro cusub
WTF?! Smart Stickers, waxaan tijaabineynaa istiikarada xabagta ee kuu ogolaanaya inaad ku dhajiso mobilkaaga ama kaniiniga meel kasta oo ka mid ah
Waxaan falanqeyneynaa WTF?! Istiikarada Smart, istiikarada xiisaha leh ee kuu oggolaanaya inaad ku dhejiso taleefankaaga dusha sare dusha sare iyada oo aan wax dhibaato ah oo ammaan ah.
Falanqaynta Huawei Nova Plus, waa qalab kaa yaabin doona
Huawei waxay la yaabtay soo bandhigida qoyska cusub ee Nova intii lagu guda jiray soo bandhigiddeedii ugu dambeysay ee IFA ee Berlin….
Tani waxay noqon doontaa Samsung Galaxy C9 ee soo socota
Laga soo bilaabo TENAA, sawirrada iyo qeexitaannada farsamo ee casriga xiga ee Samsung, Galaxy C9, ayaa la sifeeyey, oo ay ku jiraan wax lala yaabo
Meizu Pro 6, falanqaynta calanka cusub ee soo saaraha Aasiya
Waxaan falanqeyneynaa Meizu Pro 6, taleefan runtii dhameystiran oo kaa yaabin doona dhammaadka qiimaha iyo tayada kamaraddeeda ugu weyn
Dareenka ugu horreeya ee LG X Cam
LG X Cam, marka laga reebo sawirka leh kamaradaas laba-geesoodka ah ee dhabarka, waxaa loo soo bandhigay inay tahay terminal isku dheelitiran oo gebi ahaanba ah.
SwiftKey Beta waa la cusbooneysiiyay iyadoo la balaariyay qoraallada gaagaaban, qaabka aan laqarin iyo fallaaraha qaabka kiniinka
Cusbooneysiinta cusub ee SwiftKey Beta waxay soo bandhigeysaa qaab aan qarsoodi ahayn, soo gaabinta qoraalka gaaban iyo taariikhaha qaabka kiniinka.
Google ayaa bilaabi doonta laba Android Wear 2.0 smartwatches horaanta 2017
Evan Blass ayaa ka daabacay bartiisa Twitter-ka in labada Google smartwatches oo wata Android Wear 2017 ay imaan doonaan rubuca hore ee 2.0
[DHAMMAAD] UMI Plus Draw (CAALAMIGA) Guusha waa: Amadeo García Serrano
Ma dooneysaa inaad hesho UMI Plus gabi ahaanba bilaash? Hadday haa tahay, maxaad sugeysaa inaad kaqeyb gasho UMI Plus isku aadka Androidsis iyo Androidsisvideo.
Nokia D1C ugu dambeyn waxay noqon kartaa kiniin Android ah
Kiniin 13,8-inji ah ayaa u muuqda inuu yahay Nokia DC1 oo dad badani u maleeyeen inuu noqonayo shirkadda casriga ah ee ugu horreysa shirkadda ee Android
Toddobaadyada soo socda Samsung waxay ballan-qaadaysaa inay bixin doonto faahfaahin ku saabsan dhibaatada Samsung Galaxy Note 7
Samsung waxay wadaa baaritaan buuxa si ay u ogaato sababta Galaxy Note 7 u qarxayo oo sharraxaad uga bixinayo toddobaadyo yar gudahood
Samsung waxay farriimo u dirtaa milkiilayaasha Galaxy S7 si ay u xasuusiso in aaladooda ay badbaado leeyihiin
Samsung waxay u direysaa ogeysiis kuwa haysta Galaxy S7 oo ay ku xasuusinayaan in qalabkoodu gebi ahaanba aamin yahay.
LG Innotek wuxuu soo bandhigayaa Qalabka Fiilooyinka wireless-ka ee degdega ah ee casriga ah
Gawaarida Bilaashka ah ee Bilaashka ah waa sharad cusub oo ka timid soosaaraha Kuuriya ee LG si dhammaan noocyada taleefannada casriga ah ee leh wireless wireless lagu soo oogi karo suufka
Xiaomi Mi Note 2 oo soo bandhigaysa waxay muujineysaa laba kamaradood oo taagan oo toosan
Isku toosan ayaa u muuqda labada muraayadaha ee ka kooban iskudhafka laba-kamaradood ee cusub ee Xiaomi Mi Note 2 oo u muuqda in la sifeeyey
Codsiyada muhiimka ah si looga faa'iideysto Edge-kaaga
Maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa 3 codsi oo muhiim ah si aad uga faa'iideysato Edge-kaaga, codsiyada bilaashka ah dhammaantood si ay uga faa'iidaystaan ​​qalooca Samsung-gaaga.
Samsung waxay xaqiijineysaa inay si joogto ah u joojiso soo saarista Galaxy Note 7
Galaxy Note 7 wuxuu ahaa taleefankii ugu fiicnaa ee suuqa soo mara ilaa maanta, laakiin dhibaatada halista ah ee qaraxyada, ayaa ka dhigtay Samsung inay joojiso wax soo saarkeeda
Dib u eeg UMI Plus dhammaadka-sare ee UMI qiime dhexdhexaad ah
Maanta, dib-u-eegistaan ​​UMI Plus waxaan si fiican ugu lafa-gureynaa dhammaadka-dhamaadka heerka sare ee UMI ee ku yimaada qiimaha bartamaha-dhexe ama xitaa dhexdhexaad hoose ee Android.
Sawirada HTCw Halfbeack smartwatch ee wata 'Android Wear' ayaa daadanaya
Laba sawir oo ah waxa loo malaynayo inuu yahay Android Wear smartwatch oo ka socda HTC iyo Under Armor ayaa laga sii daayay Weibo, shabakadda bulshada ee Shiinaha
Samsung Galaxy Note 7 oo dab qabsaday diyaarad ayaa ka mid noqon karta bedelka
Bisha madow ee Samsung haddii la xaqiijiyo uun in Samsung Galaxy Note 7 oo dab qabsaday diyaarad ay ka mid tahay bedelka cusub.
Samsung ayaa soo saarta cows, hadda waxay dhibaato weyn ku haysaa mashiinnada dharka lagu dhaqdo
Warka ayaa noo imanaya, war xun oo Samsung ah oo imika nacasyadu ay ku soo kordhayaan dhibaatooyin cusub markan kuwa wax lagu dhaqo.
Soo dejiso Maqaarka ugu fiican, mawduuca dhammaystiran ee Huawei ama Maamuus, mawduucyada gebi ahaanba beddelaya muuqaalkaaga Huawei
Maanta waxaan rabnaa inaan dhammaantiin idinla wadaagno waxa maanta ugu fiican maqaarka ama mawduuca dhammaystiran ee loogu talagalay Huawei ama Honor. Mawduucyada ansax u ah EMUI 4.0 iyo 4.1.
Ma ku iibsan karaa taleefan casri ah oo wanaagsan wax ka yar € 200?
Beddelashada taleefannada casriga ah waa wax aan qabanno ugu yaraan laba ama saddexdii sanaba mar. Ha uga tagin naftaada hanti. Waxaa jira ikhtiyaarro jaban oo awood badan.
Markii Google uu noqday elitist, laga bilaabo Nexus ilaa Pixels, laga bilaabo taleefannada casriga ah ee la awoodi karo illaa kuwa casriga ah ee casriga ah
Qoraalkan fekerka shaqsi ahaaneed: Markii Google uu noqday elitist, laga bilaabo Nexus illaa Pixel, waxaan kuu sheegayaa sababta aad u doonayso boosteejooyinka kun euro.
Chromecast Ultra oo wata 4k oo ku qulqulaya qiime dhan € 79
Google wuxuu soo bandhigayaa Chromecast Ultra 4K oo awood u leh inuu ka sii daayo waxyaabaha ku jira tayada adeegyadan sida YouTube ama taleefannada casriga ah
Nexus 6 ayaa hada haysta Android 7.0 Nougat
Laga soo bilaabo OTA ama sawirka warshadda waxaad hadda kala soo bixi kartaa Android 7.0 Nougat oo loogu talagalay Nexus 6. Qalab dib loo dhigay.
Tani waxay noqon doontaa kiniinka xiga ee Lenovo Tab3 8 Plus
Sawirada iyo waxyaabo badan oo qeexaya Lenovo Tab3 8 Plus ee soosocda waa la sifeeyey, kiniin awood badan oo tayo leh oo dhawaan la bilaabi karo
E FUN NextBook Ares 11 waa kiniin isku dhafan oo ah Android 2-in-1
E FUN Nextbook Ares 11 waa qalab xiiso leh oo lagu bixinayo qaab isku dhafan 2-in-1 kaas oo aad ku dhejin karto kumbuyuutar aan-Bluetooth ahayn.
Huawei Mate 9 oo leh laba kamaradood oo Leica ah oo lagu dhawaaqi doono Nofeembar 3
Nofeembar 3 waxaan horey u leenahay taariikh kale oo gaar ah oo lagu calaamadeeyo kalandarka kaas oo lagu soo bandhigi doono Huawei cusub 9 oo leh laba kamaradood oo Leica ah
Waxaan si fiican u tijaabinay Xiaomi Redmi Note 3, oo ah midka ugu qiimaha badan sanadka
Waxaan ku laabaneynaa falanqaynta iyo dib u eegista fiidiyowga ee boosteejooyinka Android ee ka socda waddanka derbiga weyn ee Shiinaha, tan ...
Dhibaatooyin badan oo Samsung ah oo leh Note 7 dheeraad ah?
Samsung Galaxy Note 7 ma joojinayo dhibaatooyinka uu u keenayo Samsung, baytariyadeedu mar dambe ma qarxayaan, laakiin waxay u muuqataa in ismaamulkiisa dhibaato loo geystay Maxaa kale?
Huawei waxay eegaysaa Tizen oo loogu talagalay smartwatches-keeda soo socda
Huawei wuxuu qorsheeyey inuu soo saaro smartwatch cusub, inkasta oo markan ay ka go'i doonto Android Wear iyada oo laga door bidayo Tizen, OS-ka ay Samsung u adeegsato saacadihiisa.
Xiaomi Mi 5s iyo 5s Plus waxay soo saaraan in ka badan 3 milyan oo rikoor 24 saacadood ah
In kabadan 3 milyan oo diiwaan ayaa laga helay Xiaomi Mi 5s iyo Mi 5s Plus wax kayar 24 saacadood tan iyo markii shalay lagu dhawaaqay.
Sawirada BlackBerry DTEK60 waa la sifeeyaa kahor soo bandhigistooda
BlackBerry DTEK60 waa aaladdii saddexaad ee Android ah oo laga helo shirkadda Canadian-ka ah oo laga bilaabi doono Oktoobar 11 Kanada.
Xiaomi waxay soo bandhigaysaa Mi 5s Plus oo leh shaashad 5,7 ″ 1080p ah, 13MP laba kamaradood, Snapdragon 821 iyo 6GB oo RAM ah
Xiaomi Mi 5s Plus waa taleefanka cusub ee soo saaraha Shiinaha oo leh shaashad 5,7 ", Snapdragon 821 chip, 6GB RAM iyo laba kamaradood oo gadaal ah.
Kuwani waa taariikhihii cusbooneysiinta Android Nougat ee loogu talagalay Sony Xperia
Laga soo bilaabo Sony Slovakia shaashad la wadaagay oo muujinaya taariikhaha cusbooneysiinta Android Nougat ee Sony.
Galaxy S8 wuxuu ku shaqeyn doonaa 8895nm Exynos 10 chip oo leh Mali-G71 GPU
Mali-G71 GPU waxay bixin doontaa laba jeer waxqabadkii kaarkii hore ee Mali-T880 kaarka garaafyada waxaana lagu arki doonaa Galaxy S8 oo lagu laabay qashinkii Exynos 8895.
Samsung ayaa dib u bilaabi doonta iibinta Galaxy Note 7 ee Yurub dhamaadka bisha November
Galaxy Note 7 wuxuu ku laaban doonaa bandhigyada xarumaha ganacsi ee Yurub dhamaadka Nofeembar, sida uu sheegayo isla Samsung
Sawirada Moto M waa la sifeeyaa oo xaqiijinaya shaashadda Full HD, 4GB RAM iyo wax ka badan
Lenovo waxay suuqa Shiinaha ka bilaabi doontaa Moto M, iyada oo la tixgelinayo in gebi ahaanba ay soo saartay shirkadda Shiinaha.
Sida loo diyaariyo LG G2 cusbooneysiintiisa Android Nougat
Maanta waxaan ku tusayaa talaabo talaabo ah sida loo diyaariyo LG G2-keena si loo helo cusbooneysiinta Android Nougat ee ku soo socota Cyanogenmod.
Illaa 26 Galaxy Note 7 Dacwadaha Qarax ayaa gebi ahaanba noqon kara kuwo been abuur ah
Samsung waxay ku jirtaa mid ka mid ah xilliyadii ugu adkaa ee taariikhdeeda dhow iyadoo uu qarxay Galaxy Note 7; waxa kaliya ee aan ahayn kiisaska oo dhan sidan oo kale.
INDHO !!. Dhibaatooyin halis ah oo loogu talagalay Google Nexus 5X ka dib cusbooneysiinta OTA ee Android Nougat
Dhibaatooyin daran oo ku saabsan Google iyo LG Nexus 5X ka dib markii la helo cusbooneysiinta rasmiga ah ee loo maro OTA illaa Android Nougat ama Android 7.0.
Telefoon kale oo casri ah oo Android ah oo ku shaqeeya qalabka maqalka, HTC Bolt cusub
HTC Bolt waa mid kale oo ka mid ah terminaalka Android kaas oo ku bixin doona wax soo saarka maqalka ee caadiga ah ee taleefannada badankood maanta.
LeEco Le Pro 3 wuxuu rasmi u yahay Snapdragon 821, 6GB RAM iyo 4.070 mAh baytariya $ 299
LeEco Le Pro 3 waa mid kale oo ka mid ah taleefannada Android ee leh 6GB RAM, oo leh qashin Snapdragon 821, oo ka tagaya aaladda codka ee 3,5mm
Xiaomi Mi Note 2 wuxuu ku imaan doonaa 8 GB oo RAM ah sida ku cad sawirradan xaday
Sawir cusub oo laga filayo Xiaomi Mi Note 2 Pro ayaa xaday oo muujinaya terminal leh 256 GB oo keyd ah iyo 8 GB oo RAM ah
Rabitaanka 10 Pro iyo Rabitaanka 10 Hab nololeedka, cusub ee ka yimid HTC
HTC waxay ku dhawaaqeysaa aaladeeda casriga ah ee dhexdhexaadka ah, HTC Desire 10 Pro iyo HTC Desire 10 Hab-nololeedka, way ogyihiin kala duwanaanshaha u dhexeeya labadooda
Microsoft waxay soo bandhigeysaa taleefankeeda cusub ee Nokia 216 kaas oo Hindiya ku imaan doona qiimo dhan 37 $
Maanta waxaan aragnay Terminal-ka cusub ee Microsoft oo hoostiisa sumadda Nokia 216 loogu suuqgeynayo Hindiya kaliya $ 37.
Android-ka cusub ee ka socda BlackBerry waa DTEK60 oo leh shaashad dhan 5,5 ″ QHD, Snapdragon 820 iyo 4GB oo RAM ah
Si dhakhso leh, waxaan ka heli doonnaa Android kale BlackBerry leh DTEK60, taleefan casri ah oo leh 5,5 "QHD shaashad, 4 GB oo RAM ah iyo Snapdragon 820 chip.
HTC waxay ku dhawaaqeysaa Rabitaanka 10 Hab-nololeedka oo leh 5,5 ″ HD bandhig, 3 GB oo RAM ah iyo 4G LTE
HTC waxay soo saari doontaa laba nooc oo RAM ah iyo xusuusta gudaha ee qaabka cusub ee loo yaqaan 'Desire 10 Lifestyle' iyadoo shaashaddiisu tahay "5,5" HD.
HTC Desire 10 Pro ayaa lagu shaaciyey muuqaalka 5,5 ″ 1080p, 4GB RAM iyo dareeraha faraha
HTC waxay ku dhawaaqday Desire 10 Pro oo leh shaashad 5,5-inji ah, 4GB oo RAM ah, iyo dareeraha sawirka faraha. Qiimaha ma naqaano.
Taleefanka casriga ah ee Samsung oo wata 5 ″ shaashad iyo Snapdragon 425 chip ayaa maraya TENAA
TENAA waa mid ka mid ah tillaabooyinka waajib ku ah taleefannada casriga ah ee laga bilaabi doono Shiinaha iyo dalal badan. Hadda waxaan haynaa Samsung SM-G5510
LeEco Le Pro 3 wuxuu ku imaan doonaa Sebtember 21 laba nooc
Maqnaanshaha shan maalmood ah soo bandhigida LeEco LE Pro 3 bulshada dhexdeeda, hadda waxaan heleynaa warka ama daadinta inaysan mid noqon doonin haddaanay ahayn laba terminaal
Siri Vs Google Hada. Muxuu noqon doonaa kaaliyaha codka ugu fiican?
In this Siri Vs Google Now iska hor imaad waxaan dooneynaa inaan isku dayno inaan ogaanno kan ugu fiican kaaliyaha codka ama kaaliyaha farsamada xilligan.
Samsung ayaa ku dhawaaqday Galaxy A9 Pro oo leh shaashad 6 ″ ah iyo 5.000 mAh batteri
Galaxy A9 Pro waa shaybaarka cusub ee Samsung oo u muuqda inuu haysto batari 5.100 mAh ah iyo shaashad 6-inji ah.
LG wuxuu soo bandhigayaa LG X Cam, X Screen iyo X Power oo ka yimid gacanta Fernando Torres ee Spain
LG muddo ayey ku qaadatay Madrid saaka inay soo bandhigaan LG X Cam, LG X Screen iyo LG X Power; seddex taleefoon dhexdhexaad ah oo u dhexeeya € 229 iyo 299 XNUMX.
[Muuqaal] CAJIIB !! Gaari ku gubanaya Florida dartii Samsung Galaxy Note 7 dartii
Fiidiyow loo malaynayo in baabuur ku gubayo Florida dartiis Samsung Galaxy Note 7. Dhibaatooyinka Samsung ayaa isbiirsaday.
UMI MAX Dib u eegis
Maanta waxaan kuu keenaynaa Dib-u-eegista UMI MAX, oo beddel u ah UMI SUPER qiimo ka badan sidii loo hagaajin lahaa oo loogu tartami lahaa meesha ay ka jiraan.
Masuuliyiinta New York waxay waydiistaan ​​dadka basaska iyo tababarada isticmaala inay damiyaan taleefankooda Galaxy Note 7
MTA wuxuu mamnuucayaa adeegsiga Samsung Galaxy Note 7 dadka isticmaala basaska iyo tareenada dhulka hoostiisa mara ee New Yotk si looga fogaado qaraxyada dhici kara
Samsung Galaxy Tab A (2016) oo leh S Pen hadda waa rasmi
Samsung ayaa dhawaan South Korea kaga dhawaaqday kiniin cusub oo loo yaqaan 'Galaxy Tab A (2016)' oo ay la socoto 'Pen' oo ku kacaya qiyaastii 440 doolar.
UHANS A101, oo ah heerka gelitaanka Android wax ka yar 50 euro oo kaa yaabi doona
Maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo UHANS A101, Android 6.0 Marshmallow oo ah wax kayar 50 euro oo kaa yaabi doona.
HTC waxay ku dhawaaqeysaa Rabitaanka cusub ee 10 usbuuca soo socda
HTC waxay horey u laheyd dhacdo loo qorsheeyay bisha Sebtember 20 si loogu dhawaaqo labadeeda Rabitaan ee cusub, qaabka Desire 10 iyo Desire 10 Pro
Mobiles-ka qarxa, miyaynu la dhibaatooday kacdoonka mashiinnada?
Telefoonada u qarxa sida Samsung Galaxy Note 7 cusub waxay ahaayeen amarkii maalinta in badan. Miyaan la dhibaataysan nahay jabhadaynta mashiinnada?
Honor 6X, oo leh laba kamaradood iyo iskaanka sawirka faraha, ayaa dhowaan imaan doona
Goor aan ka fogeyn waxaan yeelan doonnaa Sharafta 6X, oo ah terminal lagu sifayn doono kamaraddeeda laba-geesoodka ah ee gadaasha iyo dareeraha sawirka faraha.
Saameeyayaasha Samsung Galaxy A8 (2016) ayaa soo muuqday
Samsung Galaxy A8 2016 ayaa laga soo duubay @OnLeaks si loo muujiyo terminal leh naqshad wanaagsan iyo qeexitaanno dhab ah
[Cusboonaysiin] Samsung waxay baabiin doontaa cillad-darrada Galaxy Note 7s haddii aan la beddelin
Samsung ayaa meel fog ka joojin doonta cillad Galaxy Note 7s sida maanta shaaca ka qaaday. In kastoo cabirkan lagu qaadi doono Faransiiska.
Xiaomi Mi 5s waxay lahaan doontaa Snapdragon 821 chip iyo 6GB oo RAM ah sida lagu soo daadiyay
Xiaomi Mi 5s waxaa loo ekeysiiyay nooc casri ah oo ka xoog badan nooca Mi 5, oo ah kan ugu caansan ee soo saaraha Shiinaha.
Lenovo Phab 2 Pro, mobilka khariidaynta booska ku leh meel kasta oo uu joogo, ayaa dib loo dhigay illaa dayrta
Waxay noqon doontaa dayrta markii Lenovo Phab 2 Pro, taleefankii ugu horreeyay ee Tango ee awood u leh khariidaynta booska, ugu dambeyntii la iibsan karo.
In ka badan 1,5 milyan oo sharaf 8s ah ayaa la iibiyay labadii bilood ee ugu horreysay
1,5 milyan oo cutub oo ka mid ah Sharafta 8 ayaa la iibiyey, terminal lagu iibsan karo € 399 oo leh shaashad 5,2 ah, 4GB RAM iyo 32GB xasuus ah.
Samsung Galaxy S8 wuxuu ku imaan doonaa laba cabbir, oo labaduba leh shaashado qalooca "Edge".
Samsung Galaxy S8 ayaa imaan doonta sanadka soo socda iyadoo leh laba shaashadood oo shaashado kala duwan oo loogu talagalay guddi gees ah oo noqday halbeeg heer sare ah.
Samsung ayaa ku dhawaaqday taleefankeeda flop-ka ee Galaxy Folder 2
Samsung waxay ku dhawaaqday Galaxy Folder 2, taleefan flip ah, kaas oo ku soo wajahan Shiinaha waqti dhow isla markaana ka baxsan heerkaas caanka ah.
Google Ugu dambeyntii wuxuu sii daayaa Nougat OTA iyo Sawirada Warshadaha ee Nexus 6P
Nexus 6P, ka dib markii uu joojiyay cusbooneysiintiisii ​​shalay, wuxuu ka helay Google muuqaalka warshadda iyo Nougat OTA xushmad leh Google.
Moto Z Play, kani waa taleefan cusub oo qaabaysan oo ka socda Motorola iyo Lenovo
Dareenka ugu horreeya ee fiidiyowga ka dib markay tijaabiyeen ciyaarta Moto Z ee IFA ee Berlin. Qalab leh nidaam module ah oo kaa yaabin doona
Amazon waxay soo bandhigeysaa Fire HD 8 cusub oo ah kiniinkeedii ugu horreeyay oo leh Alexa
Amazon waxay dib u cusbooneysiineysaa Fire HD 8 iyada oo la cusbooneysiinayo sheeko cusub oo macnaheedu yahay in lagu daro Alexa, kaaliyaha codkiisa iyo qalab casriyeysan oo keliya.
Android 7.0 Cusbooneysiinta Nougat ee Nexus 6P ayaa istaaga, Huawei ayaa ka shaqeeya
Sida ay u cadeysay Vodafone Australia boggeeda taageerada, cusbooneysiinta Android 7.0 Nougat ee Nexus 6P waa la joojiyay.
Huawei Nexus 7P wuxuu ahaan lahaa waxqabad sare laakiin kiniin yar
Shaashad 7-inji u ah kiniinka Google ee imaan doona dhammaadka sanadka oo ay soo saartay shirkadda Huawei. Waxaa loo maleynayaa inuu yahay mid heer sare ah.
Sida loo daawado soo bandhigida Apple toos, iPhone cusub oo cusub oo 7 ah
Maanta waxaan kuu sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida loo daawado soo bandhigida Apple oo si toos ah looga daawanayo fiidiyowga kumbuyuutarkaaga Windows.
Samsung waxay sharraxeysaa sababta batteriga Galaxy Note 7 uu u qarxo
Samsung ayaa u soo baxday inay faallo ka bixiso sababta bateriga Galaxy Note 7 u qarxo marka moobaylka la soo dallaco.
LG wuxuu sii wadi doonaa inuu si xoogan ugu sharaddeeyo qaybaha 'LG G6'
LG G6 wuu sii wadi doonaa inuu lahaado modullada iyo xitaa fikradda waxaa lagu kordhin doonaa kala duwanaanta iyo soo jeedinta si looga dhigo mobiil soo jiidasho leh
LG wuxuu V20 u soo bandhigayaa Android 7.0, laba kamaradood oo gadaal ah, Snapdragon 820 iyo 4GB oo RAM ah
LG ayaa hada ku dhawaaqday V20, terminal u qalma inuu noqdo kii ugu horeeyey ee suuqa ku garaaca Android 7.0 Nougat oo leh tilmaamo aad u wanaagsan
Sony Xperia XZ, sidaas cusub ee flagship Sony
Kuwani waa fiidiyowyadeennii ugu horreeyay ee muuqaal ah ka dib markii aan isku daynay Sony Xperia XZ, sumadda cusub ee Sony ee ka sarreysa waxqabadka Xperia X
Sawirrada xaday ee Xiaomi Redmi 4 waxay la muuqanayaan shaashad 5 ″ 1080p, 3GB oo RAM ah iyo batari 4.000 mAh ah
Laba sawir oo xaday Xiaomi Redmi 4 ayaa soo muuqday kuwaas oo la soo bandhigi doono toddobaadyada soo socda soo saaraha Shiinaha
Sida loo ogaado haddii batterigaaga Galaxy Note 7 uu cilladaysan yahay
Haddii aad rabto inaad ogaato haddii Galaxy Note 7 uu leeyahay mid ka mid ah baytariyada cilladaysan ee ka yimaada Samsung SDI, raac tallaabooyinka hoose
Galaxy Note7 ma sii qaadi doono batariyada Samsung SDI
Galaxy Note 7 mar dambe uma adeegsan doono baytariyada Samsung SDI qaybaha intiisa kale ee sii wadi doona in loo qaybiyo ka dib dhibaatada qaraxa daran.
Buugga 'Yoga Book', 'layaabka weyn ee Lenovo ee ku jira daabacaaddan' IFA '
Lenovo waxay qof walba ka yaabisay soo bandhigida Yoga Book, oo ah qalab aad u xiiso badan oo leh shaqooyin u gaar ah oo ku habboon in lala shaqeeyo.
HTC waxay ku dhawaaqeysaa imaatinka taleefannada casriga ee casriga ah
Khadadka Rabitaanka waxaa mar labaad loo isticmaali doonaa laba taleefan oo cusub oo si weyn ugu kala duwanaan doona qeexitaannada: Hab-nololeedka iyo Pro.
Michael Kors wuxuu bilaabay khadadka Helitaanka ee saacado waaweyn oo miisaan culus leh kuna shaqeeya Android Wear
Michael Kors waa summad caan ku ah saacadaha naqshadaha weyn ee hadda bilaabay khadadka Helitaanka ee leh 'Android Wear'.
Google waxay soo saari doontaa kiniin 7-inji ah oo ay samaysay Huawei oo leh 4 GB oo RAM ah dhamaadka sanadka
Shirkadda Huawei ayaa gacanta ku haysa soo saarista kiniinka cusub ee Google kaas oo imaan doona dhammaadka sanadka si loo beddelo wixii ahaa Nexus 7.
Hasselblad True Zoom, tani waa qalabka ku beddelaya Moto Z kamarad dijital ah
Waxaan tijaabinay Hasselblad True Zoom, oo ah qalab u rogaya Moto Z kaamiro dijitaal ah iyada oo ay ugu wacan tahay 10x zoom optical iyo Xenon flash
Moto Z, waxaan ku tijaabinay calanka cusub IFA
Mid ka mid ah waxyaabaha layaabka leh ee IFA ee Berlin ayaa ah soo bandhigida Moto Z, taleefan casri ah oo casri ah oo kugula yaabi doona falanqaynta fiidiyowga.
Samsung Gear S3, dareenka ugu horreeya
Ka dib tijaabinta Samsung Gear S3 ee Samsung oo taagan IFA ee Berlin, waxaan kuu soo qaadaneynaa qiimeynteenii ugu horeysay ee saacad soo socota oo tumanaysa.
Huawei Mate 9 iyo Mate S2 ayaa heli doona Leica dual camera
Huawei Mate 9 iyo Mate S2 labaduba waxay heli doonaan kaamiradda Leica lens-ka iyagoo dib u wada shaqeynaya si loo soo saaro sheygan taleefanka.
Beddelka Galaxy Note 7 ayaa Samsung ku kici kara lacag dhan 1.000 milyan oo yuuro
1.000 milyan oo doolar ayaa ah lacagta lagu qiyaasay in Samsung ay ku bixin doonto si ay u bedesho Galaxy Note 7 ee ay saameysay
Meizu M3 Max oo leh shaashad 6-inch ah iyo 4.100 mAh batteriga ayaa hadda rasmi ah
Meizu M3 Max waa terminal-ka cusub ee shirkadda Shiinaha ee hadda dalkeeda ku soo bandhigtay oo imaan doonta, sarrifka, 245 doolar.
Samsung Galaxy Note 7, waanu kuu tijaabinay
Waxaan ku tijaabinay Samsung Galaxy Note 7 muuqaal fiidiyoow ah IFA, oo ah qeybta cusub ee soosaaraha Kuuriya ee ku lugta leh muranka ka dhashay qaraxii baytariyada qaarkood.
Lenovo Phab 2 Pro, kani waa taleefankii ugu horreeyay ee teknolojiyadda Tango leh
Waxaan ku tijaabinay Lenovo Phab 2 Pro xarunta IFA ee magaalada Berlin, waa taleefankii ugu horreeyay ee suuqa laga helo oo leh tiknoolajiyad ku filan oo lagu fuliyo mashruuca Tango.
Xiaomi Mi Note 2 ayaa imaan doonta wakhti usbuuca soo socda
Mid ka mid ah taariikhaha ayaa noqon doona usbuuca soo socda kan kalena wuxuu noqon doonaa Sebtember 24 oo aan si rasmi ah ugu soo bandhigi lahayn Xiaomi Mi Note 2
LG V20 ma noqon doono mid qaabaysan laakiin wuxuu yeelan doonaa batariga laga saari karo
LG V20 wuxuu noqon doonaa taleefan kuu oggolaanaya inaad ku beddesho batteriga mid kale, laakiin taasi ma lahaan doonto wax qaab qaybsan ah sida G5 ay yeeleen.
ZTE Axon 7 Mini, aragtiyaha ugu horreeya
Kuwani waa fiidiyowyadeennii ugu horreeyay ee muuqaal ah ka dib tijaabinta ZTE Axon 7 Mini, taleefanka cusub ee ZTE ee u muuqda tayada codkiisa
Maamuuska 8, waxaan ku tijaabinay IFA-da Berlin
Muuqaallada fiidiyowga ee ugu horreeya kadib tijaabinta Sharafta 8 ee IFA 2016 ee Berlin. Telefoon awood leh oo leh laba kamaradood oo leh karti badan
Huawei MediaPad M3, aragtiyaha ugu horreeya ee fiidiyowga
Waxay u muuqataa in soo saaraha Aasiya uusan u muuqan mid ku filan inuu soo bandhigo noocyo cusub oo telefoonno ah, Huawei Nova iyo Nova ...
Waxaan ku wareysaneynaa Juan Cabrera, Tababaraha Wax soosaarka & Maareeyaha Xoogga Goobta ee Huawei
Waxaan fursad u helnay inaan la hadalno Juan Cabrera, Tababaraha Wax soosaarka ee Huawei, oo ku saabsan sheekooyinka lagu soo bandhigay dhacdadii soo-saaraha ee IFA 2016
Waxaan kuugu soo bandhigeynaa fiidiyow sida EMUI 4.1 u shaqeeyo, nooca ugu dambeeya ee isdhexgalka Huawei ee ku saleysan Android 6.0 Marshmallow ee IFA 2016
Huawei Nova Plus, waxaan kuugu tijaabinay IFA 2016
Waxaan ku tijaabinay Huawei Nova Plus xarunta IFA ee magaalada Berlin. Qalab aad isu dheellitiran oo loogu dhajiyay inuu yahay mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican suuqa
Huawei Nova, dareenka ugu horreeya
Waxaan kuu soo qaadaneynaa muuqaalkeena ugu horeeya ee fiidiyowga ka dib tijaabinta Huawei Nova, taleefanka cusub ee Huawei oo u muuqda kamaraddiisa hore ee 8 megapixel.
Lenovo wuxuu IFA ku soo bandhigayaa taleefannada casriga ah ee K6, K6 Power iyo K6 Note
Ogeysiis la'aan, Lenovo wuxuu ku soo bandhigay IFA seddexdeeda K6, K6 Power iyo K6 Note casriga ah. Saddex mobiles xiiso leh qiimo jaban.
Archos 133 Oxygen, kiniin leh shaashad 13,3 and ah iyo qaraar buuxa oo HD ah € 199
Archos 133 Oxygen waa 13,3 "kiniin shaashad leh oo la soo saaray iyadoo diiradda la saarayo qoyska iyo guriga.
Wax soosaarka cusub ee LG V20 wuxuu muujinayaa qaabeynta laba kamaradood
Qoraalkan cusub ee 'LG V20' wuxuu muujinayaa laba kamaradood oo lagu dhejinayo dhabarka taleefanka maalmo uun ka dib soo bandhigiddiisa.
Amazon UK waxay muujineysaa qiimaha gobolka ee loo yaqaan 'Xperia X Compact' iyo 'Xperia XZ'
Xperia XZ iyo Xperia X Compact waa laba xirsi oo xiise leh oo Sony ah, maqnaanshaha ogaanshaha qiimaha rasmiga ah, waxaan ka ognahay Amazon UK
Waa rasmi, Samsung waxay joojineysaa iibinta Galaxy Note 7 si ay u bedesho boosteejooyinka ay saameeyeen
Samsung waxay joojineysaa iibinta Galaxy Note 7 waxayna beddeli doontaa dhammaan moodooyinka ay dhibaatadu ka soo gaadhay batteriga.
Kaaliyaha codka ee dhegaha ee Sony ayaa loo qorsheeyay inuu yimaado bisha Nofembar
Xperia Ear waa mid ka mid ah qalabka ay ku shaqeyso shirkadda Sony ee loogu magac daray Internet-ka Waxyaabaha, kaas oo si rasmi ah suuqa looga bilaabi doono bisha November.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Samsung Lock-kiisa wanaagsan iyo dejintooda suurtagalka ah
Maanta waxaan idin tusayaa dhammaan qaababka suurtagalka ah iyo wax kasta oo Samsung Lock Good uu na siiyo.
Waxaa lagu soo bandhigay Sony Xperia XZ oo leh 5,2 ″ 1080p screen, Snapdragon 820 iyo 23MP camera
Sony's Xperia ZR ayaa hadda lagu soo bandhigay carwada IFA si ay noogu kaxeyso terminal leh taxane taxane ah oo tilmaamaya
Sony wuxuu ku dhawaaqay Xperia X Compact, taleefan yar oo sawir weyn leh
Sony Xperia X Compact waxaa lagu soo bandhigay IFA wuxuuna leeyahay shaashad 4,6 ", 3GB oo RAM ah iyo muraayad weyn oo dhan gadaasha.
Huawei MediaPad waa kiniin cusub oo leh shaashad 8,4-inji ah
Shirkadda Huawei ayaa hadda ku soo bandhigtay kiniiniga 3-inji ah ee MediaPad M8,4 carwada IFA ee magaalada Berlin, taas oo loo soo bandhigay inay tahay wax soo saar wanaagsan.
Huawei wuxuu Bilaabay Nova iyo Nova Plus Telefoonada Dhex-dhexaadka ah ee IFA 2016
Huawei wuxuu soo bandhigayaa Nova iyo Nova Plus oo ah laba taleefano dhexdhexaad ah oo leh astaamo xiiso leh iyo naqshad gaar ah.
HTC waxay soo bandhigeysaa One A9s leh shaashad 5-inji ah oo ah 720-inch iyo Helio P10 chip
HTC waxay keentaa taxanaha sanadkii hore One A9 oo ay la socoto One A9s, taleefan u muuqda mid shaashadiisa 5,5 ah iyo qalabka 'Helio P10'
Lenovo wuxuu muujiyaa Moto Z Play inuu yahay taleefan leh madax-bannaani weyn oo qaybsan
Haddii aad raadineyso taleefan casri ah oo leh nolol batari weyn, shirkadda Lenovo ee Moto Z Play ayaa sheeganeysa inay heysato 50 saacadood oo ay ku raaxeysato saacadaha oo dhan.
Xperia XZ iyo Xperia X Compact Press Sawirrada ayaa si qarsoodi ah u sii daayay ka hor Launch
Laba taleefan oo cusub, Xperia X Compact iyo XZ, oo loogu talagalay soo saaraha Japan oo ka bilaabi doona carwadan IFA ee ka socota Berlin.
Samsung waxay ku dhawaaqday Gear S3 classic iyo xuduudaha Gear S3
Haddii la barbardhigo Gear S2, Gear S3 waa smartwatch cusub oo ka socda Samsung oo la socda Tizen laguna cusbooneysiiyay astaamaha.
Qeybinta Galaxy Note 7 waa la daahiyay sida ay Samsung shaacisay maadaama qaraxyo kale la soo sheegayo
Samsung waxay dib u dhigeysaa qeybinta Galaxy Note 7 illaa ogeysiis dheeri ah sababo la xiriira dhibaatooyinka qaraxa ee soo gaaray dadka isticmaala qaarkood.
ASUS waxay ku dhawaaqeysaa ZenPad 3S 10 oo leh shaashad weyn iyo maqal for 379
€ 379 waxaad ka iibsan kartaa ASUS ZenPad 3S 10 oo yeelan doonta awood ballaaran oo fiidiyoow iyo maqal ah. Kiniin lagu soo bandhigay IFA.
ASUS waxay soo bandhigeysaa ZenWatch 3 smartwatch at IFA 2016
Waxaan horeyba uheynay mid kamid ah smarwatches-ka carwadan IFA 2016, ASUS ZenWatch 3. Wearable under Android Wear leh isbadal dhanka muuqaalka ah.
[APK] Sida loo rakibo isdhaafsiga adeegsadaha cusub ee Samsung Galaxy Note 7 Samsung. Daaha ogeysiiska, shaashadda qufulka cusub iyo is-dhexgal cusub oo loogu talagalay isku-darka badan ee Android
Maanta waxaan ku tusinayaa sida ay u fududahay in la rakibo istcimaalaha adeegsadaha cusub ee Samsung Galaxy note 7 ee ku yaal saldhigayaga Samsung.
Xiaomi waxay muujineysaa Amazfit, oo ah smartwatch la awoodi karo oo ku qalabaysan GPS
Xiaomi ayaa shaaca ka qaaday Amazfit, oo ah smartwatch waxqabad wanaagsan leh isla markaana diirada saaraya jir dhiska oo lagu iibsan karo $ 120.
Moto M wuxuu maraa TENAA isagoo soo bandhigaya shaashad dhan 5,5 ″, 3GB oo RAM ah iyo batari 3.000 Mah ah
Moto M wuxuu noqon doonaa Smartphone-ka soo socda ee dhexda dhexe ee Lenovo wuxuuna hada soo maray TENAA oo leh 5,5 "shaashad, 3GB oo RAM ah iyo 3.000 mAh baytar.
Samsung Galaxy S8 wuxuu lahaan lahaa 12 + 13MP laba kamaradood, dareemayaal cusub oo sawirada la iska qaado iyo iris scanner
Samsung Galaxy S8 ayaa imaan doonta MWC waxaana lagu soo bandhigi doonaa 12 iyo 13 MP oo laba kamarad ah xaga dambe iyo midka hore ee 8MP.
Sony waxay ku dhawaaqeysaa smartwatch-ka E-Ink, FES Watch U
Haddii aad rabto 3-toddobaad smartwatch ah oo si buuxda loo habeyn karo, Sony's cusub ee FES Watch U ayaa laga yaabaa inay xiiso weyn leedahay.
Samsung waxay soo bandhigeysaa Exynos 7 Quad 7570 CPU cusub
Sida Apple oo kale, Samsung waxay naqshadeysaa CPU-yadeeda u gaarka ah kaas oo u oggolaanaya inuu yeesho kala duwanaansho weyn markii u gaar ah ...
Dib-u-eegis Leagoo M5, oo ah terminal wanaagsan oo Android 6.0 ah oo keliya 60 Euros
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa Dib-u-eegista Leagoo M5, oo ah Android Marshmallow lehna biro, processor wanaagsan, shaashad aad u fiican iyo farta akhristaha.
Sawirada dhabta ah ee Meizu M3 Max, casriga ah ee la tartami doona Xiaomi Mi Max
Meizu M3 Max waa xarafka soo saaraha Shiinaha ee aan hadda ku arki karno qaar ka mid ah sawirrada dhabta ah ee la sifeeyey.